HAIN-TRANO MAHATSIRAVINA :: Ankizy telo mianadahy kila forehitra tao an-trano • AoRaha
HAIN-TRANO MAHATSIRAVINA Ankizy telo mianadahy kila forehitra tao an-trano
Zava-doza. Tsy manam-paharoa ity nitranga tany Morafeno-Marovoay, tamin’ ny alin’ny 24 mey lasa teo ity. Maty kilan’ny afo tao an-tranony ny zaza telo mianadahy. Tsy tao an-trano ireo ray aman-dreniny tamin’io fotoana io, fa nanao ny asa andavanandro mivarotra hani-masaka amin’ny alina.
“Izahay tsy mampirehitra afo ao an-trano satria mpivarotra hani-masaka any an-tsena no asanay amin’ ny alina. Efa avy misakafo izahay vao mody any an-trano matory. Tamin’io alina io tokony tamin’ny 9 ora sy sasany dia naterin’ ny anabaviko tany an-trano izy telo mianadahy zanakay, 14, 10 ary 5 taona. Tokony ho telopolo minitra taorian’izay dia nisy olona tonga teo amin’ny tsenanay nilaza fa may ny tranonay. Tsy lavitra eo amin’ny tsena loatra io trano io ka vao nitodika nijery tany izahay efa afo niredareda no hita. Nandeha teny an-toerana nijery tsy nisy inona azo atao intsony”, hoy Randriamanantena Jean Mômô, rain’ireo ankizy namoy ny ainy.
Nitazana ilay afo niredareda nandoro ny trano sisa no nataon’izy mivady ireto. Ireo ankizy tamin’io fotoana io vao avy naterina handeha hatory. “Tsy nisy fanantenana intsony ny hahaveloman’ izy telo mianadahy satria mafy ny fijoalajoalan’ny afo. Ny entana rehetra tsy nisy noraisina. Ny trano fonenana tsy laizana intsony fa potika tanteraka. Fongana tanteraka ny fiainanay mivady ankehitriny”, hoy ihany ity raim-pianakaviana ity.
Hatramin’ny omaly dia manahy ny fisian’ny fandorana nataon’ny olon-tsy fantatra izy mivady ray aman-drenin’ireo namoy ny ainy. “Manahy izahay fa mety fanahiniana nodorana ny tranonay. Misy ny famotorana ataon’ny polisy nanontany anay izay mety olona ahianay ho nahavanon-doza, saingy tsy mahalala izahay. Tsy misy olona manana olana aminay. Izahay ihany koa tsy nametraka fitoriana momba io tranga io satria tsy fantatray izay olona mety ho nahavanon-doza”, hoy kosa Rasoarivelo Marie Hélène, renin’izy telo mianadahy.
Manao antso ho an’ny mpitondra fanjakana izy mivady ireto mba hanampy azy ireo amin’izao zava-doza mihatra amin’izy mivady izao. “Vonjy voina hanarenana indray ny fiainanay mivady no anton’izao
fangatahana fanampiana izao. Sady namoy taranaka no very fananana nihariana tao anatin’ny taona maro”, hoy izy ireo.
FAHATRARANA RONGONY 140 KILAO :: Hihatra amin’ireo Maorisianina eny am-ponja ny lalàna eto Madagasikara